Ciidamada dawladda federaalka iyo kooxda Ahlu-sunnaha oo guulo ka sheegtay dagaallo ka socda agagaarkay Garbahaaray. – Radio Daljir
Ciidamada dawladda federaalka iyo kooxda Ahlu-sunnaha oo guulo ka sheegtay dagaallo ka socda agagaarkay Garbahaaray.
Garbahaarey, April 27 -Dagaalo culus oo u dhaxeeya kooxaha Al-shabaab iyo Ahulu-suna Waljamaca oo garab ka heleysa ciidanka DFK ee Soomaaliya ayaa ka dhacey degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Wararku intaasi waxey ku darayaan in dagaalkaan uu ka qarxey Tuulo Barwaaqo oo 20-km u jirta degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo. Dagaalka oo dhacey saakey aroortii ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada DFKS ay weerar xooggan ku qaadeen fariisin ay deegaanka Tuulo Barwaaqo ku lahaayeen kooxda Al shabaab.
Afhayeenka kooxda Ahlu-sunnaha ee gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi ayaa saxaafadda maxalliga ah u sheegay in dileen ku dhawaad 20 xubnood oo ka tirsan xarkada Alshabab. Afhayeenku waxaa uu sidoo kale hadalkiisa siiraaciyay iney wadaan qorshe aad u ballaaran oo lagu baabi’inayo kooxda Alshabaab ee dagaallada culus kula jirta ciidanka dawladda iyo kooxda Ahlu-suna Wal-jamaca.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxey dhinaca kooxda Al shabaab oo ku aaddan dagaalkaasi, waxaase muuqatey in mudooyinkaan ay isi soo tareysey dagaallada u dhaxeeya Alshabaab iyo ciidanka dawladda iyo kuwa Ahulusuna oo isku garab ah. Alshabab ayaa dagaallada ka socda gobolka gado kala kulantay khasaare badan kuna lumisay dhul badan oo ay horay uga talin jireen.
Maxamed Cabdullahi Kooshin,